रोनाल्डोसँगै खेल्ने मार्सेलोको चाहना ! | Hamro Khelkud
रोनाल्डोसँगै खेल्ने मार्सेलोको चाहना !
म्याड्रिड (एजेन्सी)– रियल म्याड्रिडका लेफ्ट ब्याक मार्सेलो बेर्नाबेउ छाड्न चाहिरहेको बताइएको छ । मार्सेलो पूर्व सहकर्मी क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग खेल्नका लागि युभेन्ट्स जान चाहेको चर्चा स्पेनिस मिडियामा छाएको छ ।
३० वर्षे रक्षक सान्टियागो सोलारीकोको प्रशिक्षणमा यो सिजन संघर्ष गरिरहेका छन् । जसका कारण यो सिजनको सुरुवातमा उनी धेरै खेलमा बेन्चमै रहेका छन् । सोलारीको आगमनसँगै मार्सेलो टोलीमा पर्न संघर्षरत छन् ।
युभेन्ट्सबाट आउने कुनै पनि प्रस्तावलाई म्याड्रिडले स्वीकार गरोस् भन्ने पक्षमा मार्सेलो रहेको बताइएको छ । जसले उनी पुनः रोनाल्डोसँग खेल्ने वातावरण बन्न सक्दछ । रियलमा हुँदा मैदान भित्र वा बाहिर यी दुईबीच निकै गहिरो दोस्ती थियो ।
सन् २००६ यता मार्सेलो रियलको महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा रहँदै आएका छन् । उनले रियलबाट ४ सय ७१ खेल खेलिसकेका छन् । उनले रियलसँग रहेर ४ ला लिगा, २ कोपा डेले रे र ४ पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेका छन् ।